I-Artemisia House - Indlu encane enhle - I-Airbnb
I-Artemisia House - Indlu encane enhle
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Nicoletta
Indawo yami yokuhlala iseduze nezithuthi zomphakathi, impilo yasebusuku, imisebenzi yomndeni, ukuthenga, ipaki yedolobha, isibhedlela, indawo yabahamba ngezinyawo, isikhungo somlando. Indawo yami yokuhlala ifanele izithandani, abantu abazihambela bodwa, abahambi bebhizinisi, imindeni (enezingane) nabangane abanoboya (izilwane ezifuywayo).
Indawo yami yokuhlala iphansi futhi ngaphakathi inengadi encane, inekamelo lokulala elinombhede ophindwe kabili kanye nemibhede emibili noma emithathu yabantu abangabodwa. Umbhede wesithathu ongashadile ungabekwa ekamelweni noma emnyango wendlu. Indawo yami yokuhlala ingahlala abantu abathathu.
4.68 · 40 okushiwo abanye
Isimo somakhelwane siyakhazimula, sinendawo yabahamba ngezinyawo enezitolo eziningi zokuthenga, izindawo zokupaka zomphakathi ngemali ekhokhwayo noma nge-disc yokupaka, amabha, amakhefi, izindawo zokuphumula, izindawo zokudlela, ama-pizzeria, njll. njll
Zonke izihambeli zingaxhumana nami ngaphambi kokubhuka nangesikhathi sokuhlala kwazo.